Rustico for adventurers-Casa della Pace
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTanja Leonie Theresia
Ixesha lokuphuma kwaye utshaje iibhetri zakho, fumana impembelelo entsha okanye ube nexesha lokuba yintoni eyenza ubomi bube bubuhle. ICasa della Pace inikezela ngeyona ndawo ifanelekileyo yoku nombono wayo ophefumlayo wentlambo.
Ixesha lokuphuma kwaye utshaje iibhetri zakho kwaye ube nexesha lento eyenza ukuba ubomi bube bubuhle. Ngombono wayo ophefumlayo wentlambo, iCasa della Pace yeyona ndawo ifanelekileyo yokwenza kanye loo nto.
IVosa, ilali yaseTicino engekachukunyiswa kukuphithizela kwabakhenkethi, ikwindawo yokungena kwiNtlambo ye-Onsernone. Bathi yeyona ntlambo yaseTicino. IVosa iphantsi komasipala baseIntragna naseLoco. Ukusuka ePila, isikhululo esiphakathi semoto yentambo ye-Intragna-Costa, ungafikelela kwiVosa kwaye ngaloo ndlela iCasa della Pace ngaphantsi nje kwemizuzu engama-30 ngeenyawo. Indlela yokukhwela intaba ikhokelela ngqo kwipropathi. Akukho ukufikelela ngqo kwimoto. Kwizindlu ezingama-23 ebezihlala iintsapho ezinkulu ngaphambili, zimbalwa kuphela ezihlala unyaka wonke, ezinye zingamakhaya eeholide. Nangona iCasa della Pace iziimitha ezingama-600 kuphela ngaphezulu komphakamo wolwandle, uziva ngathi usentabeni kwaye awuboni ngabamelwane bakho. Ujikelezwe ngamahlathi, iintaba kunye nemilambo, usondele kakhulu kwindalo. Imilambo i-Isorno, iMaggia, iMelezza kunye neLake Maggiore ibonelela ngamathuba okuhlamba. Ungathenga kwaye uhambe kwindawo yeMeditera kwiidolophu ezimbini ezikufuphi zaseAscona naseLocarno.
Indlu - Casa della Pace
ICasa della Pace enemigangatho emibini yahlaziywa ngo-1983. Incinci kwaye ithambile, kwaye yenziwe ngokufanelekileyo. Isihlalo esinetafile yegranite kunye nebhentshi ikumema ukuba ube ne-brunch, ngakumbi kwiiyure zentsasa ezitshisa ilanga. Iloggia egqunyiweyo enendawo yomlilo, kwelinye icala, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlanganisana. Ubusuku bunokuphela kakuhle ngeglasi yewayini yeTicino emnandi. Igadi inethafa kwaye ixhotyiswe ngezityalo ezininzi. Inika iindawo ezininzi zokurhoxa ezifihlakeleyo.
Kumgangatho ophantsi kukho igumbi elipholileyo lomlilo elinokufikelela kwikhitshi-igumbi lokuhlala, isitovu seenkuni, isitovu segesi, itafile yeplanga kunye nezitulo ezi-4, i-buffet yasekhitshini, isinki yamatye enamanzi abandayo, izitya kunye ne-cutlery. I-staircase yangaphakathi ikhokelela kwigumbi lokulala. Ifriji iyafumaneka kumgangatho ongaphantsi.
Igumbi lokulala legalari elinombono wekhitshi, iibhedi ezi-2 ezingatshatanga, isifuba sedrowa, idesika kunye nesitulo sigqibezela umnikelo. Ngesicelo, ibhedi esongwayo eyongezelelweyo inokubonelelwa abantwana.
I-WC / izixhobo zokuhlambela
Ishawa, indlu yangasese kunye neendawo zokuhlambela zibekwe ecaleni kwendlu kwindlu encinci eyahlukileyo, evuleleke kwicala lentlambo. Amanzi ashushu aveliswa yibhoyila yokutshisa iinkuni.
Iloggia enendawo yomlilo edibeneyo, itafile yokutyela enezitulo ezi-4 kunye nesitulo sokuphumla esitofotofo siyakumema ukuba uhlale.
Ukukhanyisa kunikezelwa ngamandla elanga angama-220V, iithotshi kunye nezibane zeti.
Iilinen zebhedi ecocekileyo, iitawuli, iphepha langasese, ii-agent zokucoca, iitawuli zasekhitshini kunye nezipontshi zasekhitshini ziyafumaneka kwaye zinikezelwe.
Nceda uqaphele ukuba siya kukuhlawulisa umrhumo wokucoca we-150.00.
ICasa della Pace ayiboneleli eyakhe iWiFi.
IVosa ityiswa ngumthombo wamanzi. Nangona kunjalo, kuyacetyiswa ukuba ubilise amanzi okusela kwangaphambili.
Ukususela ngo-15:00. Uya kufumana inkcazo ecacileyo yokuhamba ngekhowudi yebhokisi engundoqo nge-imeyile emva kokubhuka.
Kude kube ngu-10:00 a.m. Uya kufumana imiyalelo malunga nendlela yokukhangela kwisayithi.
IVosa, ilali yaseTicino engekachukunyiswa kukunyakazela kwabakhenkethi, ilele ekungeneni kwiNtlambo ye-Onsernone. Yaziwa ngokuba yeyona ntlambo yaseTicino. IVosa iphantsi komasipala baseIntragna naseLoco. Ukusuka ePila, isikhululo esiphakathi semoto yentambo ye-Intragna-Costa, ungafikelela kwiVosa kwaye ngaloo ndlela iCasa della Pace ngaphantsi nje kwemizuzu engama-30 ngeenyawo. Indlela yokukhwela intaba ikhokelela ngqo kwipropathi. Akukho ukufikelela ngqo kwimoto. Kwizindlu ezingama-23 ebezihlala ziintsapho ezinabantwana abaninzi, zimbalwa kuphela ezihlala unyaka wonke, ezinye zingamakhaya eeholide. Nangona iCasa della Pace iziimitha ezingama-600 kuphela ngaphezulu komphakamo wolwandle, ivakala ngathi isezintabeni kungekho bamelwane. Ujikelezwe ngamahlathi, iintaba kunye nemilambo usondele kakhulu kwindalo. Imilambo i-Isorno, iMaggia, iMelezza kunye neLake Maggiore ibonelela ngamathuba okuqubha. Ungathenga kwaye uhambe kwindawo ye-mediterranean yeedolophu ezimbini ezikufuphi, iAscona kunye neLocarno.
ICasa della Pace enemigangatho emibini yaphinda yakhiwa ngo-1983. Incinci kwaye ithambile kwaye inefanitshala ebonakalayo. Indawo yokuhlala enetafile yegranite kunye nebhentshi ikumema ukuba ube ne-brunch, ngakumbi kwiiyure zentsasa enelanga. Iloggia egqunyiweyo enendawo yomlilo kwelinye icala yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlanganisana. Iglasi yewayini yaseTicinese emnandi yeyona ndlela ilungileyo yokujikeleza ngokuhlwa. Igadi inethafa kwaye inezityalo ezininzi. Inika iindawo ezininzi zokurhoxa ezifihlakeleyo.
Kumgangatho ophantsi kukho igumbi elipholileyo lomlilo elinokufikelela kwikhitshi-igumbi lokuhlala, indawo yokupheka ngamaplanga, umpheki wegesi, itafile yeplanga, izitulo ezi-4, i-buffet yasekhitshini, isinki yamatye enamanzi abandayo abandayo, izitya kunye ne-cutlery. I-staircase yangaphakathi ikhokelela kwigumbi lokulala. Kukho ifriji kwi-cellar.
Igumbi lokulala legalari elinombono wekhitshi, iibhedi ezi-2 ezingatshatanga, isifuba sedrowa, idesika kunye nesitulo sigqibezela umnikelo. Ngesicelo, ibhedi eyongezelelweyo inokubonelelwa kubantwana.
Ishawa, indlu yangasese kunye nezixhobo zokuhlamba zibekwe ngokubhekiselele kwindlu kwi-cottage ehlukeneyo, evulekele kwicala lentlambo. Amanzi ashushu aveliswa ngebhoyila eyenziwe ngamaplanga.
Iloggia enendawo yomlilo edityanisiweyo, itafile yokutyela enezitulo ezi-4 kunye nesitulo somgangatho okhululekileyo siyakumema ukuba uhlale.
Ukukhanyisa kunikezelwa ngamandla elanga angama-220V, iitotshi kunye nezibane zeti.
Iilinen zebhedi ecocekileyo, iitawuli, iphepha langasese, ii-agent zokucoca, iitawuli zasekhitshini kunye nezipontshi zasekhitshini zibonelelwa.
Nceda uqaphele ukuba sibiza umrhumo wokucoca we-150.
IVosa ibonelelwa ngamanzi aphuma emthonjeni. Nangona kunjalo, kuyacetyiswa ukuba ubilise amanzi ngaphambi kokuba uwasele.
Ukususela ngo-15:00. Uya kufumana inkcazo yokufika eneenkcukacha kunye nekhowudi kwibhokisi engundoqo nge-imeyile emva kokubhukisha kwakho.
Kude kube ngu-10:00 am. Uya kufumana imiyalelo yokuphuma kwisiza.
4.93 ·Izimvo eziyi-14
4.93 · Izimvo eziyi-14
Umbuki zindwendwe ngu- Tanja Leonie Theresia
UTanja Leonie Theresia yi-Superhost